Home » Vaovao momba ny fiantohana fiara » Fanofana fiara Enterprise hisolo an'i Deem
Enterprise Holdings dia hahazo orinasa teknolojia fitsangatsanganana Deem.
Ny orinasam-piaramanidina fiara lehibe indrindra manerantany, Enterprise Holdings, dia manompo maherin'ny 95 isan-jaton'ny tsenan'ny fanofana fiara manerantany ary mpamatsy vola vitsy an'isa ao Deem hatramin'ny 2016. Ankehitriny, hividy mivantana ny orinasa izy.
Enterprise Holdings androany dia nanambara ny fikasany haka an'i Deem monina any San Francisco - sehatra teknolojia fitetezam-paritany tantanina izay ahitana Deem Work Fource sy Deem Ground Work, andiana famandrihana an-tserasera sy vokatra teknolojia fitsangatsanganana ho an'ireo mpandeha raharaham-barotra, mpitantana dia lavitra, orinasam-pitantanan-dia , sy mpamatsy.
Mpanjifa orinasa maherin'ny 50,000 sy orinasa lehibe fitantanana fitsangantsanganana lehibe indrindra manerantany no efa mampiasa rindrambaiko fitaterana sy fitaterana an-tanety an'i Deem. Tamin'ny fahazoana farany, ity fifanakalozana ity dia hanome an'i Deem fampidirana renivohitra sy loharanom-bola hanampiana amin'ny fanitarana bebe kokoa ny sori-dalan'ny vokatra ary hampitombo ny hafainganan'ny fampandrosoana sy fanatsarana ny vokatra.
"Ny fitambaran'i Deem ny fananana ara-tsaina sy ny talenta ara-teknolojia dia manolotra fotoana manan-danja ho an'ny Enterprise Holdings hanatsara kokoa sy hanitatra ny serivisy serivisinay," hoy i Greg Stubblefield, filoha lefitra mpanatanteraka sady Lehiben'ny paikadim-pahefana ho an'ny Holdings Enterprise, izay tompon'ny Enterprise Rent-A- Fiara marika, Fividianana fiara nasionaly ary marika Alamo Rent A Car.
Vahaolana momba ny dia sy fitaterana an-tany
Enterprise sy Deem dia niara-niasa mba hitondra vahaolana amin'ny fitaterana sy fitaterana an-tanety ho an'ny mpanjifa. Nanomboka tamin'ny 2011, Deem dia nanolotra ny haitao ao ambadiky ny sehatra famandrihana fitsangatsanganana EHIDirect an'ny Enterprise Holdings ho an'ireo orinasa kely sy salantsalany. Vao haingana izay dia niara-niasa ny Enterprise sy ny Deem hanolotra fiara nasionaly sy mpamily ao Shina amin'ny alàlan'ny marika National Car Rental.
Amin'ny alàlan'ny Work Fource, Deem dia manome fidirana amin'ny haitao fitsangatsanganana vaovao izay mahatonga ny famandrihana fitsangatsanganana orinasa sy ny traikefa amin'ny dia mahomby kokoa ho an'ny mpandeha, orinasa ary mpiara-miasa amin'ny maso ivoho. Ankoatr'izay, ny sehatra Deem's Ground Work dia manome fitaovana en ligne ho an'ny famandrihana fitaterana an-tanety efa voatokana ho an'ny orinasa sy orinasam-pitantanana fitsangatsanganana.
Ny fahazoana dia antenaina hikatona amin'ny telovolana voalohany 2019 aorian'ny fahafaham-po amin'ny fepetra fanidiana mahazatra. Deem dia hanohy hiasa irery avy amin'ny foibeny Silicon Valley ary hanolotra ny teknolojia fitsangatsanganana an-tsokosoko ao anatin'izany ny rivotra sy ny hotely ary koa ny safidy fitaterana an-tanety manerana ny fiara lehibe manofa, fiara mainty, ny hailing ary ny mpanome serivisy. John F. Rizzo dia hijanona amin'ny andraikiny amin'ny maha Chief Executive Executive, ary koa ny ekipa ekipa Deem executive.
"Fantatray fa ny indostria dia mila vahaolana fitantanana fitsangantsanganana izay manova ny traikefan'ny mpandeha ary mampihena ny vidin'ny orinasa", hoy i Rizzo. “Hotohizanay ny iraka hanomezana mpizahatany sehatra milamina izay maminavina izay tadiavin'izy ireo sy ilainy ary miasa tsy an-kijanona ho azy ireo any aoriana.”
Krish Panu, filohan'ny Deem ary mpiara-miasa amin'ny mpamatsy vola Deem, PointGuard Ventures, dia nanampy hoe, "Tombontsoa iray ny niara-nanambola tamin'ny Enterprise Holdings ao amin'ny Deem. Miaraka amin'ny renivola sy ny refin'ny Enterprise, Deem dia afaka manitatra ny ekipany sy ny loharanon-karena hitondrany ny hafainganan'ny fanavaozana haingana kokoa. ”
Paikady fanararaotana sy paikady-orinasa
Enterprise Holdings dia fananan'ny fianakaviana Taylor any St. Louis ary, amin'ny maha orinasa tsy miankina azy, dia tsy hanambara ny fe-potoana ara-bola momba ny fahazoana Deem. Na izany aza, ny fahazoana ny orinasa Holdings sy ny paikadim-bola ho an'ny orinasa dia manohy mifantoka amin'ny teknolojia sy maodelim-barotra izay tsy vitan'ny hanafainganana ny vahaolana fitaterana mitarika indostrialy, fa koa ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny tsena miova haingana.
Tamin'ny 2007, nividy ny marika National sy Alamo ny orinasa, ny fividianana lehibe indrindra hatreto. Hatramin'ny 2008, nandany efa ho $ 2.4 miliara dolara i Enterprise tamin'ny fanaovana fividianana vola sy fampanjariam-bola ho an'ny orinasa any Etazonia, Kanada, UK, France, Ireland, Spain, Brazil ary China. Ahitana orinasa fanofana fiara, fiasan'ny fiara, sehatra teknolojia ary franchise.
Androany, ny Enterprise Holdings - miorina amin'ny fidiram-bola - dia eo amin'ny tampon'ny indostrian'ny fizahan-tany manerantany, mialoha ny zotram-piaramanidina maro sy ny ankamaroan'ny sambo fitsangantsanganana, hotely, mpandraharaha fizahan-tany ary masoivohon'ny fizahan-tany an-tserasera. "Efa ela izahay no nankasitraka ny fanoloran-tenan'i Deem hamorona vahaolana vaovao mifantoka amin'ny mpanjifa, ary koa manangana ekipa sy kolontsaina tsara," hoy i Stubblefield nanamarika. "Mino izahay fa io fampiasam-bola maharitra io dia hanohy handoa dividends manerantany mandritra ny taona maro ho avy."